Masar - Wikipedia
- Total $350 Billion
w:ar:مصر w:arc:ܡܨܪܝܢ Masar (; ) sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyada Masar ee Carabta, جمهورية مصر العربية waa wadan ku yaalo Woqooyiga Afrika, wadankaan waxee leedahay buundo dhulka ah oo la dhoho Siinaa, waxeena isku xirta afrika iyo aasiya. Wadankaan waxoo xuduud la leeyahay wadamada Libiya, Suudaan, Falastiin iyo Israaiil, Dhinaca woqooyi neh waxaa kaga dhegan Bada dhexe, dhinaca bariga neh waxaa kaga dhegan Bada cas, Caasimada wadanka waa Qaahiro. Masar waxee ka midtahay wadamada ee ku noolyihiin dad aad u badan marka la fiiriyo wadamada afrika. Wadankaan waxaa degan dad gaaraayo ilaa 79,089,650 oo qof (dad tiriskii 2010), Dadka badankooda waxee degan yihiin magaalo yaasha waaweyn gaar ahaan meelaha oo wabiga Niil maro. dhinaca kale masar waxee leedahay dhul saxaaro oo aad u weyn, meelahaas neh dad badan ma degeno.Masaarida sxiibo fiican ayee la ahaan jireen madaxda somalida. Masar waxee ka midtahay wadamada aadka u duqsan, waxeena leedahay taariikh aad dheer. Wadankaan waxaa markiisa hore xukumi jiray boqortooyo, waxaana lagu yaqaanaa ama ee caan ku tahay Mudulada sadax geeska ah oo lagu magacaabo afka ingriiska (Pyramids), waxeena ku yaalaan magaalada Gisa. Muduladaan sadax geeska ah waxaa la dhisay kumanaan sano kahor, waxaana dhisay adooman oo markaas boqortooyada masar lahaan jirtay. Masar waxee leedahay waxyaabo badan oo taariikhi ah oo lala yaabo. wadanka masar waxee ka midtahay wadamada gumeestaha yurubiyaanka ee qabsadeen. Masar waa qayb ka mid ah waqooyiga africa oo leh dalal dalxiis ah oo ka mid ah Algeria, Tunisia, Morocco.
USS America 1981 Sanad Kanaalka Suweys
Buurta Siinay. Israaʼiil waxay teendhooyin ka dhisteen Buurta Siinay oo Yehowah axdi buu iyaga la dhigtay
3 Waddanmaha deggan Masar
4 Taariikh masar
Misrayim wuxuu ahaa farcankii qabiilooyinka Masar (sidoo kale qaar ka mid ah qabiilooyinka aan Masar ahayn), magacana wuxuu la mid ahaa Masar. (Kaasu wuxuu ahaa kii labaad oo wiilashii Xaam: „Wiilashii Xaamna waxay ahaayeen Kuush, iyo Misrayim, iyo Fuud, iyo Kancaan.” Kitaabka quduska, Bilowgii 10:6) Haddaba, erayga “Masar” ee tarjumaadaha Ingiriisiga wuxuu dhab ahaan u tarjumaa Cibraaniga Mits·raʹyim (ama Ma·tsohrʹ dhowr xaaladood). Kiniinnada Amarna, oo la qoray nuskii hore ee kunnigii labaad ee B.C.E., waxay Masar u tixraacaan Misri, oo la mid ah magaca Carabiga casriga ah ee dhulka (Misr)..
Waddanmaha deggan MasarEdit
United States 10,000+
United Kingdom 14,000+
South Korea 1000+
Arab League 12,500+
Algeria 2000 +
Abdul Fatah al-Sisi, president vanaf 10 juni 2014
...Estatua faraonica al Temple de Loxòr...
File:EgyptAir Cargo logo.png
01 Qaahiro 70033085000000000003,085 70069655000000000009,655,000 70033009000000000003,009 El Qahirah
02 Alexandria 70032300000000000002,300 70064812186000000004,812,186 70032092000000000002,092 Alexandria
03 Beheira 70039826000000000009,826 70065804262000000005,804,262 7002591000000000000591 Damanhur
05 Dakahlia 70033538000000000003,538 70065949001000000005,949,001 70031681000000000001,681 Mansoura
06 Damietta 7002910000000000000910 70061330843000000001,330,843 70031462000000000001,462 Damietta
09 Gharbia 70031942000000000001,942 70064751865000000004,751,865 70032447000000000002,447 Tanta
04 Kafr El Sheikh 70033467000000000003,467 70063172753000000003,172,753 7002915000000000000915 Kafr El Sheikh
11 Matruh 7005166563000000000166,563 7005447846000000000447,846 70002700000000000002.7 Marsa Matruh
08 North Sinai 700428992000000000028,992 7005434781000000000434,781 700115000000000000015 Arish
07 Port Said 70031345000000000001,345 7005666599000000000666,599 7002496000000000000496 Port Said
Dhagax ka Rosetta
↑ Egypt in Figures 2015, CAPMAS
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Masar&oldid=234875"
Last edited on 28 Abriil 2022, at 09:26
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Abriil 2022, marka ee eheed 09:26.